अहिलेको कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ५० प्रतिशत लोकप्रिय मत बोकेको र यतिखेर भीमकाय मानिएको एकीकृत वाम पार्टीलाई अर्को चुनावमा हराउन सक्ने क्षमता को खोजी हुनु हो । यो कुरा चानचुने हिसाबबाट र अर्को चुनावमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो हुन्छ भनेर बताइएकै भरमा हुने कुरा होइन । यसले शैली पनि नयाँ खोज्छ । भनिन्छ संसारमा गर्ने वा बोल्ने कुनै नयाँ कुरा बाँकी छैनन् । काम उही हो केवल त्यसलाई कसरी गरिन्छ, कस्तो शैलीमा गरिन्छ भन्ने मात्रै नयाँ हुन्छ । नीति ठीक छ, कार्यक्रम ठीक छन भने अभाव हो शैलीको । अब पनि नयाँ शैलीले काम गरिएन भने कुरा त त्यही हुन्छ जो पहिले भएको थियो र परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ जो पहिले आएको थियो । यसका धेरै उदाहरण कायम भई नै सकेका छन् । अबको प्रश्न हो त्यसलाई दोहो-याउने कि सुधार गर्ने ?
मतको मूल्यांकन : २०४८ सालमा कांग्रेसले ११० सिट जित्दा एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । जनमोर्चाले ९ सिट । केही साना वाम पार्टीले अरू पाँच सिट जितेका थिए । कांग्रेसको लोकप्रिय मत सबै कम्युनिस्ट पार्टीको जोड्दाभन्दा धेरै थियो त्यो बेला । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले कांग्रेसभन्दा एक सिट धेरै ल्यायो, तर लोकप्रिय मत कांग्रेसकै धेरै थियो । २०६४ मा माओवादीले कांग्रेसलाई आठ लाख हाराहारी लोकप्रिय मतले पछाडि पा-यो । कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले कांग्रेसभन्दा धेरै लोकप्रिय मत ल्याएको त्यो पहिलो इतिहास थियो । यसपालि एमालेले पहिलो पटक कांग्रेसभन्दा धेरै लोकप्रिय मत ल्यायो । २०७० मा कांग्रेसले एमालेभन्दा एक लाख ७८ हजार मत धेरै ल्याएको थियो । यसपालि एमालेले कांग्रेसभन्दा ४५ हजार मत धेरै ल्यायो । अर्थात् पाँच वर्ष अवधिमा दुई लाखभन्दा धेरै मत कांग्रेसको तुलनामा एमालेतिर गयो । लामो समय कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो पार्टी थियो, अब त्यो मत कता जाला भन्ने अहिलेको प्रमुख चिन्ता हुनुपर्छ ।
चिन्ता गरेरमात्र पुग्दैन त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । विवरणहरुले देखाएका छन् –१८ देखि ४० वर्ष भनेको बहुसंख्यक मतदाता हो । शिक्षित मतदाता त्यही हो । आजको र भोलिको नेपाल त्यही हो । कांग्रेस त्यहाँ कमजोर छ भने अवश्य मुलुकभर कमजोर हुन्छ । आज कमजोर छ भने आउँदा वर्ष झनै कमजोर हुनेछ । जनमत खुम्चिनुको मूल कारण नयाँ मतदाताका रूपमा वर्षेनी थपिने लाखौं युवा कांग्रेसभन्दा अरू पार्टीतिर आकर्षित हुनु हो । कांग्रेसबाट विमुख हुनु हो । नेपालमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको मतदाता संख्या सबैभन्दा ठूलो छ । युवाहरुले क्रियाशीलता खोज्छन् भने उमेर ढल्दै गएकाहरुले सम्मान । उनीहरुमा अनुभव हुन्छ भने युवामा जाँगर र जोस । सम्मान र क्रियाशीलताको उचित संयोजन गरियो वा भयो भनेमात्र संगठनले बल पाउँछ । १८ देखि ४० वर्षका मतदातामाझ कांग्रेसको जनाधार लगातार घट्दै जानु भनेको पार्टी बूढो हुँदै जानु हो । विश्लेषकहरुका अनुसार नेता बूढा भएर पार्टी बूढो हुँदैन जब कुनै पार्टीलाई मत दिने मतदाता बूढा हुँदै जान्छन् त्यसपछि भने पार्टी पक्कै बूढो हुन्छ । कांग्रेसको अहिलेको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो ।
युवामा कसरी आकर्षण भर्ने : १८ देखि ४० वर्षका मतदातामाझ कांग्रेसको जनाधार लगातार घट्दै गएको मान्ने हो भने कांग्रेसको पहिलो रणनीति हुनुपर्छ यिनलाई आफूतिर कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने । यो संस्थागत नै हुनुपर्छ । माथि नै भनियो उमेर बढेकाहरुले सम्मान खोज्छन् भने वयस्कहरुले सक्रियता वा क्रियाशीलता  । योे सक्रियता वा क्रियाशीलता यो वर्गलाई कसरी दिनेभन्ने सोच राख्नै पर्छ । मतदातानमा होस कि पार्टीमा नयाँ सदस्यता लिनेमा माथि भनिएको जस्तो समूहको संख्या ठूलो हुन्छ । तर हामीकहाँ यस्तो नयाँ सदस्यले सांगठनिक रुपमा के भूमिका पाएको छ ? यसको उत्तर खोज्नुपर्छ । त्यो काम गर्ने विधानले नै हो । भनाइमा होइन, विधानमा यस्तो क्रियाशीलता खोजौं । उनले पाउने अवसर र उनलाई दिने ठाउँको सुनिश्चितता गरौं । जस्तो एउटा सदस्यले इकाइमा नेतृत्व लिन खोजे स्वाभाविक छ उसले नयाँ सदस्यता थप्नुपर्ने हुन्छ । उसको आन्तरिक प्रेरणाले गरेको यो कामबाट यता संगठनलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैपनि सदस्यता विस्तारित गर्ने भन्ने कांग्रेसको यसपछिको एउटा अभियान त हुन्छ नै । त्यो अभियानमा युवाहरु बढी सक्रिय हुनेछन् नै । क्रियाशील सदस्यता राख्ने हो भने नयाँ सदस्यताको पनि एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ र स्वतः क्रियाशीलता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अहिले त्यस्तो छैन । यी प्रस्तावहरु युवामा आकर्षण भर्ने सन्दर्भका भएका हुँदा यसलाई त्यही रुपमा लिइयोस् ।
नेपाली कांग्रेस महासमिति सन्दर्भ संशोधित विधानमा गरिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाका लागि केही संक्षिप्त प्रस्ताव – सदस्यता र मापदण्ड : एकै प्रकारको सदस्यता कायम गर्ने । नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने, तोकिएको उमेर पुगेका र कांग्रेसको विधानअनुसार अयोग्य नठहरिएका सबै नेपाली यसको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने । पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र सदस्यले तिर्नुपर्ने शुल्क तथा पालना गर्नुपर्ने आचरणसमेत स्पष्ट खोलेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निश्चित अवधिभित्र परेका आवेदन छानबिन गरी सदस्यता पाउने वा नपाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउने । कुनै व्यक्तिले सदस्यता पाउने वा कसैले नपाउने निर्णय पनि पारदर्शी गराउने ताकि के कारणले सदस्यता पाइयो वा के कारणले पाइएन भन्ने सम्बन्धित आफैंले आफनो मूल्यांकन गर्ने वातावरण बनोस् ।
सदस्यले इकाइको नेतृत्व छान्ने : यस्तो मापदण्ड पुगेको र त्यसका आधारमा सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले संगठनको कम्तीमा सबैभन्दा तल्लो तह इकाइको नेतृत्व छान्ने व्यवस्था गर्ने । यसले पार्टीको मापदण्ड पुगेको ठानेर सदस्यता दिइएको वा लिइएको सदस्यताको महत्व बढाउँछ र संगठनको सिद्धान्त र स्वामित्वलाई आत्मसात गर्ने वातावरण बनाउँछ । इकाइ नेतृत्वले महासमिति–महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने : पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वका मतदाता महासमिति सदस्य– महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने अधिकार इकाइ नेतृत्वलाई दिने । यसो गरिँदा एउटा इकाइ सदस्यको भूमिका बढाउँछ र जवाफदेही पनि बनाउँछ ।
अथवा : केन्द्रीय सभापति सहितको नेतृत्व इकाइ तहबाट नै छानिने । यस्तो बेला इकाइ नै हालको महासमिति सदस्य–महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियतमा रुपान्तरित हुनेछ । यसले केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष रुपमा इकाइप्रति जवाफदेही बनाउँछ साथै संगठन विस्तारमा एउटा नयाँ गति र संगठनका तहगत नेतृत्व छनौटमा व्यापक लहर ल्याउँछ देशैभरि । यस्तो बेला कांग्रेसको सदस्य हुन उत्साह पनि थपिनेछ भने अर्कोतर्फ केन्द्र र इकाइ निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्ने तुल्याउँछ ।
केन्द्रीय सदस्य पनि इकाइबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था : केन्द्रीय सभापतिसहितको पदाधिकारी बाहेक सबै केन्द्रीय सदस्य इकाइ तहबाट नै प्रत्यक्ष छानिएर आउनुपर्ने । (हालको व्यवस्थामा केन्द्रीय सदस्य स्वत महासमिति सदस्य–महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ) । केन्द्रीय समिति सदस्य जस्तो व्यक्ति अर्को महाधिवेशनमा स्वत प्रतिनिधि हुने कुराले यस्तो सदस्य कहिल्यै तल्लो तहसम्म पुग्ने अवस्था नआउन सक्तछ । साथै केन्द्रीय नेतृत्वको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै छानिनुपर्ने । प्रादेशिक संगठन पूर्णाधिकार सम्पन्न : प्रादेशिक संगठन पूर्णाधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । संघीय राज्यव्यवस्थाले प्रदेशलाई जस्तो अधिकार दिएको छ राजनीतिक दलले पनि आफ्ना प्रदेश संगठनलाई त्यति अधिकार त दिनै पर्छ । यी प्रदेश संगठनलाई सदस्यता वितरणदेखि उम्मेदवार चयन, निर्वाचन परिचालन र परिणामप्रति पनि पूर्ण जवाफदेही बनाइनुपर्छ ताकि गुणदोष यही प्रदेशको नेतृत्वमा जाओस् । यतिबेला एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिने अवस्था यो पूर्णाधिकारले समाप्त गर्ने अवस्था आउँछ ।
विधानअनुसारको काम नहुँदाको व्यवस्था : विधानमा उल्लेख भएअनुसारको संगठनको काम तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न विधानमै व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । एउटा महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अर्को महाधिवेशनको समय आइपुग्दासमेत अधुरै रहने गरेका जस्ता आवस्थाको अभ्यासलाई विधानमा नै किटानी गरेर अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिलेको विधानमा दुई महिनाभित्र संगठन विस्तार भइसक्नुपर्ने र एक वर्षमा महासमिति बैठक बस्नुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । यो कुरा अब दोहोरिन नदिन नेतृत्वलाई विधानले नै बाध्य परिनुपर्छ ।
सदस्य मनोनयन : अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार खास गरी केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीमा उठेको व्यक्ति सो पदमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुने परम्परा जस्तै बनेको छ । यसलाई सीमित गराइएन भने केन्द्रीय सदस्यमा भन्दा पदाधिकारीमा बढी संख्या खडा हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो बेला निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले पाएको मतको आधार तोकियो भने एउटा स्थिति बन्नेछ । त्यस्तै जुन व्यक्ति जुन तहको जुन पदमा पराजित भएको हो त्यो व्यक्तिलाई त्यही पदमा मनोनयन गर्ने प्रचलनको पनि विधानतः नै अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसो नहुँदा अन्तर संगठनको निर्वाचनको अर्थ, महत्व र पद्धतिमा नै प्रश्न खडा हुन सक्तछ  । (आर्थिक दैनिकबाट)